Global Voices teny Malagasy » Rosia: “Mpankahàla Rosiàna aho” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Septambra 2020 13:43 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, avylavitra
Sokajy: Rosia, Ady & Fifandirana, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny Jona 2009)
Ny 10 Jona, tao amin'ny bilaoginy, navoakan'i rusanalit, olona iray mpampiasa ilay sehatra fanoratana bilaogy LiveJournal, ity lahatsoratra mananihany ity  (amin'ny fiteny rosiàna) :
Ary izaho koa mba mpakahàla Rosiàna:
Ary izany indrindra no antony anoratako hoe i Staline dia naniry ery ny hanampy am-pahamendrehana ny fireneny, saingy rehefa hita ny vokatr'ireo hadisoana nataony, very daholo ireo vokatry ny asa nataony talohan'ny ady. Izany no antony, raha tsy tia an'i Staline ianao, saingy raha andramanao ny mandalina tsy mitanila ny asany – dia azo ilazana anao ho mpankahala Rosiàna izany.
Satria, na omeko rariny aza i Poutine noho izy nitàna anjara asa goavana tamin'ny fanakànana ny firongatr'ireo Tsetsena 20 tao Rosia vokatry ny fisintahana ofisialy nataon'io faritany io tamin'i Rosia, dia heveriko fa TSY MISY ILANA AZY I POUTINE ANY IVELAN'I TSETSENIA, ANY AMIN'IREO SEHATRA HAFA REHETRA. Izany hoe, rehefa tsy milela-body an'i Poutine ianao, nefa manandrana mandrakariva ny handalina ny asany amin'ny fomba tsy mitanila, dia mpankahàla Rosiàna ianao izay.
Tsy tiako i [Mikhail Kovalchuk ] sy [Gennady Timchenko ] : itsy voalohany dia tena nanao tantely afa-drakotra ny [Gazprom ], raha ilay faharoa indray dia nkaa tsotra izao vola an-davitrisa dolara tao amin'ny kitapombolan'ireo orinasam-panjakàna [Sibneft ] sy [Rosneft ] raha tokony ho mpanelanelana amin'ny resaka fandraharahana ny solika no andraikitra sahaniny. Izany no antony mahatonga anao ho mpankahala Rosiàna, raha miantso ampahibemaso hoe “mpandroba” ireo mpanapitrisa-mpangalatra akaikin'ny fitondrana.
Satria tsy tiako ny zavamisy hoe miankina betsaka amin'ny fitrandrahana ireo akora fototra ny toekaren'ny firenena, ary ny governemanta dia tsy tia velively ny hanova io toedraharaha io, afa-po amin'ny zavatra rehetra – raha izany, mpankahala Rosiàna aho.
Raha mihevitra ianao fa asan'ny fitondrana ny manavotra ain'ankizy rosiàna marobe […], fa tsy ny manentsina eny amin'ny tsenambola ny fahavoazana ara-bolan'ireo vahiny mpampiasa vola – raha izay dia mpankahala Rosiàna ianao.
Izay izany, manaiky aho. Raha toa izay no fizotran'ny zavatra rehetra, dia mpankahàla Rosiana aho. Satria amin'izay tranga izay, ny hoe mpankahàla Rosiàna dia lasa anaram-boninahitra.
Ary ianao, iza ianao ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/20/149780/
 ity lahatsoratra mananihany ity : http://http://rusanalit.livejournal.com/723063.html